Abalandeli Besikhumulo Sezindiza Esikhulu seBig Blades HVLS
Esikhumulweni sezindiza saseBali, ungabona abalandeli bethu uma uphuma esikhumulweni sezindiza.Kuyashisa e-Indonesia, futhi abalandeli be-HVLS baba yindlela enhle yokuhlala bepholile futhi benomoya….
Ukusakazwa komoya okulinganiselayo kukhawula umoya omile, izindawo ezishisayo nezibandayo, nokucinana, okusiza ukugcina ukudla kukhiqize omile futhi okusha ukuze kunciphise ukonakala….
Abalandeli be-HVLS baguqukile njengoba ubuchwepheshe buthuthuke ngokushesha. Manje zitholakala ezindaweni ezahlukahlukene zezimboni, ezentengiselwano nezokuhlala, imvamisa zisebenza ngokubambisana nezinhlelo ze-HVAC zokonga amandla. Eqinisweni, abalandeli be-HVLS abonga ugesi basebenzise ngokushesha indima ephambili enhlanganweni yokwakha eluhlaza…
Abathandi be-Ventilation Gym Corssfit Australia
Abalandeli be-HVLS Gym Corssfit Australia Kubalulekile ukuqaphela indima edlalwa ukulawulwa kwesimo sezulu ekugcineni izinkundla zemidlalo yangaphakathi, izindawo zokuzivocavoca ezikhethekile nezikhungo zokuzivocavoca, iklabhu yezempilo ipholile futhi inomoya. Uma ungazi nakancane ukuthi yini umlandeli wevolumu ephezulu, onejubane eliphansi (HVLS) angayenzela ukulawula isimo sezulu ……
I-Giant Ceiling HVLS Fan Yenzelwe
KHETHA abalandeli be-HVLS, ububanzi obusuka ku-2.7m kuye ku-7.3M, bokusiza ukuxazulula inkinga yokupholisa nomoya….
I-Industrial Big Fan Philippines
Uchungechunge lwe-OPT Navigator fan entsha yophahla fan iqale yakhelwe ngokusebenzisa i-PMSM theory ngenhloso yokwehlisa izindleko zokwenziwa. Amandla futhi angagcinwa okungenani ama-50% lapho uhlobo olusha lwemoto luqhathaniswa nefeni evamile ngokususelwa kunjini yokungeniswa.I-PMSM entsha iyadingeka ukuhlangabezana ……
Abalandeli be-PMSM Motor HVLS
KHETHA abalandeli bezimoto ze-PMSM Isingeniso Somkhiqizo- Abathandi bezimoto be-PMSM Umoya ovela kumlandeli we-HVLS uhamba uye phansi kukholamu ekhanya kuzo zonke izinhlangothi, ugeleza uvundle uze ufike odongeni - noma ukugeleza komoya kusuka komunye fan - lapho uphendukela phezulu futhi igelezela emuva ibheke kufeni. Lokhu ……
Abalandeli be-Big Ceiling Long Blades
Abalandeli Abakhulu Bokufaka Long Blades…
KHETHA Abalandeli be-HVLS PMSM Commercial Big size Free Maintenance
Umlandeli we-OPT PMSM unobubanzi obukhulu bamamitha ayi-7.3. Umkhiqizo uhlanganisa uchungechunge lobuchwepheshe obuthuthukisiwe obufana ne-aerodynamics, i-transmission dynamics, ubuchwepheshe be-pulse wide modulation control technology, imishini yokusebenza, ubuchwepheshe bokulingisa, ukulawula ukuxhumana, ukwakhiwa kwezimboni, njll., Futhi yenziwa ngemishini yokucubungula esezingeni eliphakeme ekhaya nakwamanye amazwe. Kungakhuthaza ukusakazwa kokungena komoya ngaphansi kokusebenza kahle okukhulu, kufinyelele inhloso yabasebenzi bokupholisa, futhi kuthuthukise kakhulu ukunethezeka kwemvelo….
I-KQ Series-HVLS Abathandi Abakhulu Bophahla
Abalandeli be-OPT HVLS Extra Large Ceiling Fans Isingeniso-abalandeli be-plailing abakhulu abengeziwe Abalandeli abaphezulu be-plailing abakhulu ngevolumu ephezulu isivinini fan esetshenziselwa indawo enkulu evulekile yokupholisa nokungenisa umoya. Manje usunendlela ephumelelayo nebiza kakhulu yokuhlala upholile ehlobo futhi ufudumele ebusika. I-sleek ……
Khetha abalandeli be-PMSM Supermarket Energy Saving Fans
I-PMSM uzibuthe unomphela wokuvumelanisa i-brushless drive eqondile yemoto inokulawula okuphezulu, ubukhulu be-torque ephezulu nokuqina okuhle kwe-torque. Umsindo ophansi, usayizi omncane, ukusebenza kahle okuphezulu, amandla amakhulu, ukusebenza kahle kwamandla nokukhuphuka kwezinga lokushisa eliphansi….
I-10 Ft HVLS Ceiling Fan - I-PMSM Motor-Yezimboni / Yezentengiso
Abalandeli be-OPT 10FT HVLS PMSM Motor Industrial Cooling Ventilation Ngama-motors angenalutho ahlehlayo angenza idormouse ibonakale inomsindo, futhi ilula, imiklomelo yokuwina imiklomelo ezoguqula uphahla lwakho lube yindawo ephambili, abalandeli bethu bezentengiselwano bazokwenza yonke indawo kusuka emahhovisi kuye ezindaweni zokuphekela kuya ……